Izikolo zobugcisa ze-10 eCanada ngeeScholarships
Nazi izikolo eziphambili ze-10 zobugcisa eCanada ezibonelela ngezifundo kunye nezinye iindlela zoncedo lwabafundi kubo bobabini abafundi baseCanada nakwamanye amazwe.
Ngaba unomdla ongaqhelekanga kubugcisa kwaye ufuna ukuphucula izakhono zakho okanye nokulandela ikhondo lomsebenzi kuwo nawaphi na amasebe obugcisa? Kuya kufuneka uye kwisikolo sobugcisa esiya kukunceda ukuba uphucule ezi zakhono kwaye zikwenze ube yingcali.
Eli nqaku linolwazi olupheleleyo kwizikolo zobugcisa eCanada ngezifundo kunye nolunye uncedo lwezemali kubemi nakwabafundi bamazwe aphesheya ukuba baqeqeshwe kwicandelo lobugcisa.
Ubugcisa budala njengendoda buqu kwaye bube notshintsho oluninzi okoko kwaye buqhubeka njengesiphumo sophando olunzulu kunye novavanyo olunzulu. Ukuyilwa kwetekhnoloji yedijithali ngokulinganayo kube negalelo ekukhuleni kobugcisa kwaye kwavula iindlela ezintsha zobugcisa ezinje ngokufota, oopopayi, uyilo lomdlalo, ubugcisa bokwenyani, njl.
Kwangoko, ndibhale inqaku ndityhila ezona zikolo zibalaseleyo ehlabathini kubafundi bamazwe ngamazwe nabasekhaya onokuthi ujonge kuyo.
Ukuba ujoliso lwakho alugcini nje kwizikolo zobugcisa kodwa izikolo ekhaya okanye phesheya ngezifundo, ungajonga uluhlu lwethu Izikolo zamazwe aphesheya ezinesifundi esipheleleyo.
ICanada yenye yezona ndawo zibalaseleyo zokufunda kwihlabathi, inezinga eliphantsi lolwaphulo-mthetho, imozulu elungileyo, kunye nendawo efanelekileyo kunye nomgangatho wokufundisa yincopho ephezulu, eyaziwayo kwihlabathi liphela. Izikolo zobugcisa eCanada zixhotyiswe kakuhle zombini ngabahlohli abasemgangathweni kunye nolwakhiwo ukuze ube ngumfundi wobugcisa ongcono.
Ndenze uluhlu lwezona zikolo zibalaseleyo eCanada ezibonelela ngezifundo kunye nezinye iindlela zoncedo lwezezimali ukunceda abafundi ngemali nokubakhuthaza ukuba babe ngabafundi abangcono.
Izikolo zobugcisa eCanada (kunye neeScholarship)
IYunivesithi yase-Alberta yezobugcisa
IYunivesithi yaseConcordia, iFakhalthi yoBugcisa boBugcisa
IYunivesithi yaseEmily Carr yoBugcisa kunye noYilo
IGeorge Brown College, iZiko lobuGcisa kunye noYilo
Ikholeji yaseNova Scotia yoBugcisa kunye noYilo
Ikholeji yaseOntario yobuGcisa bobuGcisa kunye noYilo
Isikolo saseYukon soBugcisa boBoniso
Ikholeji eNtsha yaseBrunswick yoBugcisa kunye noYilo
Isikolo sobugcisa i-Ottawa
Ikholeji yaseSheridan, iFakhalthi yoopopayi, ubuGcisa kunye noYilo
Ke, emva kophando olubanzi kuzo zonke izikolo zobugcisa eCanada, ndakwazi ukuqokelela amaziko obugcisa ali-10 kunye nezifundo ezikhoyo eCanada.
IYunivesithi yaseConcordia, iSebe lezoBugcisa boBugcisa
Eyasungulwa ngo-1926, iYunivesithi yase-Alberta yoBugcisa yaziwa njengesona sikolo sikhulu sobugcisa eCanada, esikwaziyo ukukhulisa ubuchule kunye nokuqhuba izinto ezintsha, i-AUArts ikhuthaze amawaka abafundi ukuba balandele kwaye bafezekise iinjongo zabo zobugcisa.
Ukunceda abafundi baqhubeke, iziko minyaka le libonelela ngoncedo lwezezimali ezinje ngezifundo, iibhasari, amabhaso, kunye namabhaso okunceda ukuxhasa ngemali izifundo zabo nokwenza amaphupha azaliseke.
Ii-AUArts zibonelela ngeentlobo ezahlukeneyo zamabhaso minyaka le ezisetyenziswa ngabafundi bamanye amazwe kunye nabaseCanada ukuba baphambili nakweyiphi na inkalo yobugcisa abazikhethele yona, kubalulekile ukuba wazi ezi ndidi zamabhaso ukuze ukwazi ukuba ungasifaka siphi na isicelo. Ezi mbasa zezi;
Ukungena kwiBhaso loSholarship Uhlobo lwebhaso olufumanekayo kwii-AUArts ezihlaziyayo okanye abafundi bexesha lokuqala xa bengenisa ipotifoliyo yabo kwaye banikezelwa njengekhredithi yokufunda.
Ibhaso leScholarship elizenzekelayo Luhlobo lwebhaso lemali yokufunda elingadingi ukuba umfundi afake isicelo endaweni yoko bakhethwe ngokuzenzekelayo ngokusekwe kwizifundo zabo kunyaka ophelileyo wokufunda okanye umsebenzi womfundi.
Ukhuphiswano lweeBhaso leScholarship Luhlobo lwebhaso elifuna ukuba abafundi bagcwalise kwaye bangenise ifom yesicelo kwaye kukho iindlela ezizodwa ekufuneka zenziwe ngabenzi-sicelo ngaphambi kokuba banyulwe ngobuchule okanye kwikomiti yebhaso.
Iibhasari ngamabhaso anikwa abafundi abajongana nemicimbi yezemali.
amabhaso amabhaso anikwa abafundi anokuba ngohlobo lweencwadi, ukubonelelwa, iimedali, iipleyiti, imirhumo kunye nezatifikethi zezipho.
I-faculty inabafundi abangaphezu kwe-3,800 ababhalise kwiiprogram ze-60 zesidanga sokuqala kunye nezokuthweswa isidanga kwindawo ebonisa ukuvuleka kunye nokwahluka kwenkcubeko yanamhlanje, eyenziwe ngabaphandi abaziwayo, amagcisa, kunye nabaphengululi abanikezela ngemfundo esemgangathweni kwaye basebenza njengophawu lokukhuthaza kubafundi.
IYunivesithi yaseConcordia, ubugcisa bobugcisa obuhle yenye yezona zikolo zibalaseleyo eCanada. Unamasebe alithoba kunye namaziko ophando obugcisa obuzibophelela ekudibaniseni ubuchwepheshe obutsha, imithombo yeendaba zemveli, kunye neendlela zembali zobugcisa.
Iyunivesithi ikwabonelela ngezifundo zokuba abafundi bafundisise nakweliphi kula masebe alithoba.
Eliziko linamabhaso amabini okufunda ngobuchule bobugcisa obuhle kwaye;
Isifundo sikaHeather Walker Memorial yasekwa ngo-1995 licandelo lobugcisa obuhle ngeminikelo yoogxa kunye nabahlobo kwaye yanikezelwa minyaka le kubafundi abagcweleyo okanye abasisigxina kwenye yeenkqubo ezinikezelwa kwiCinema okanye kwiFoto. Abaphumeleleyo kwesi sibonelelo sokufunda bakhethwe ngokusekwe kubugcisa babo nakwimpumelelo yokufunda kunye nokuzibophelela kwimisebenzi yoluntu.
UHeather no-Erin uMvuzo woLuntu ikwasekwa ngo-1995 licandelo lobugcisa obuhle ngeminikelo yoogxa kunye nabahlobo kwaye yanikezelwa minyaka le kumfundi opheleleyo okanye wethutyana obhalise kwisidanga sobugcisa bobugcisa. Abafakizicelo bakhethwe ngokusekwe kwiinkonzo zabo zokunceda abantu, ukugqwesa kwezemfundo nakwezobugcisa, kunye neenkonzo zoluntu.
PHAWULA: Izifundo zezabafundi besidanga sokuqala kuphela
Eyasungulwa kwi-1925, iYunivesithi yase-Emily Carr yoBugcisa kunye noYilo (i-ECUAD) sesinye sezona zikolo zibalaseleyo kwezobugcisa eCanada ezinendawo yokufunda efanelekileyo enikezelwe kugqweso kunye nokuyila kubugcisa obubonwayo, kubugcisa beendaba nakwiyilo. I-ECUAD ibonelela abafundi ngokufundisa okusemgangathweni, kokubini okusebenzayo kunye nethiyori, nangaluphi na uhlobo lobugcisa abajolise ekufundeni abafundi benziwa iingcali kwicandelo labo lokufunda.
I-ECUAD sisikolo esaziwayo sobugcisa esiya kukunceda njengomfundi ukufezekisa iinjongo zakho zobugcisa, kwaye kule minyaka iyunivesithi yenze abafundi abaninzi ukuba bazalisekise iphupha labo ngokusebenzisa izibonelelo zonyaka zokufunda / zoncedo lwezezimali olusebenza ngabo bonke abafundi.
I-ECUAD ibonelela ngenani elifanelekileyo loncedo lwezezimali minyaka le ukunceda abafundi kwaye
Inkxaso mali yaBafundi abaDala Luhlobo loncedo lwezezimali lwabafundi abatsha, abafundi abakhoyo ngoku, kunye nabaphumeleleyo abanokuthi bafaneleke ukufumana inkxaso mali.
Ukungena kwi Scholarship iqulethe malunga namanye amabhaso asixhenxe avulekileyo kubo bonke abafundi basekhaya nakwamanye amazwe kwaye bavuzwa ngokufumana abafundi abaphumeleleyo kwizifundo zabo kunye nezakhono zobugcisa. Ezi zifundo ziya kugubungela icandelo elibalulekileyo lokufunda kunyaka wabo wokuqala.
Isifundo seZifundo zinikezelwa kubafundi ngohlobo lokuncitshiswa kwezifundo kwezi zinto zilandelayo zokuwa kunye neesemester zonyaka kwaye banemali engaphezu kweshumi elinambini yezifundo ezifumanekayo kubafundi bokuqala, besibini nabesithathu ababhalise kwi-12 okanye iikhredithi ezingaphezulu kwi-ECUAD. Kuphela ngabafundi abagcina ubuncinci be-CGPA ye-3.33 ngexesha lesicelo (ngo-Matshi) banelungelo lokufaka isicelo.
Ulwabiwo lwangaphandle inokuba lulo naluphi na uhlobo loncedo lwezezimali oluvela kwimithombo yangaphandle engaphandle kwe-ECUAD enokufunyanwa ngabafundi kwaye bagqibe ekubeni bayisebenzise kwi-ECUAD.
Inkxaso mali yabafundi unikezelwa kumfundi ophumelele i-ECUAD owaziwayo ngokugqwesa kunye nezinto ezinokubakho kwezobugcisa kwaye kukho inani lezifundo ezifumanekayo kwisicelo.
Inkxaso-mali yaBafundi Bomthonyama luhlobo loncedo lwezezimali oluchithwe kuphela kubafundi bemveli njengenxalenye yokuzibophelela kwesikolo ekuqinisekiseni impumelelo yabo kwizifundo.
Igcinwe ngamaziko ophando lobugcisa obuphezulu kwaye ikumbindi wesixeko esityebileyo nesinamandla, iGeorge Brown College, iZiko lobuGcisa kunye noYilo kulapho kufuneka ufunde khona ukuze ufumane izakhono ezisebenzayo nakweyiphi na indlela yobugcisa / uyilo oluthandayo kwaye ikulungiselela uhambo lwengqesho.
Isikolo sesinye sezikolo zobugcisa eCanada ezibonelela ngezifundo ezininzi ngonyaka kubafundi bamazwe aphesheya nakwasekhaya abafuna ukuba yinxalenye yeli ziko lobugcisa laziwayo, ezi mfundo zezi;
IDiploma / isiDanga seScholarship. Amashumi amathathu ananye ama-scholarships anikezelwa kubafundi abafanelekileyo ababuyayo kwi-diploma yexesha elizeleyo okanye iiprogram. Ukulungela isicelo sokufunda, abafaki-zicelo kufuneka bathathe inxaxheba kwimisebenzi ebenegalelo kwabanye abafundi, kwisebe labo lezemfundo, okanye kwisikolo ngokubanzi.
Kwakhona, umfundi kufuneka ukuba agqibe ubuncinci iisemester ezimbini ezilandelelanayo zokufunda kunye ne-CGPA encinci ye-3.5 ngaphambi kwesemester yangoku.
Ukufundiswa kweeSatifikethi Ibhaso liyafumaneka kubafundi abafanelekileyo ababuyela kwinkqubo yesatifikethi sexesha elizeleyo. Umenzi-sicelo kufuneka abe ne-CGPA ye-3.5 kwaye azibandakanye nenkuthalo kuluntu lwesikolo.
Ulwabiwo-mali lwe-EAP Inezinto ezilishumi elinesibhozo zokufunda ezifumanekayo kubafundi abafanelekileyo ababuyayo be-ESL. Umfaki-sicelo kufuneka aligqibe ubuncinci inqanaba elinye lesiNgesi kwiNkqubo yeeNjongo zeziFundo ngenqanaba eliPhakathi kwaye uthathe inxaxheba kwimisebenzi ebenegalelo kwabanye abafundi, kwisebe labo lezemfundo, okanye kwisikolo ngokubanzi.
Ulwabiwo-mali lwangaphandle izifundiswa ezivela kwimithombo yangaphandle ngaphandle kweKholeji yaseGeorge Brown, iZiko lobuGcisa kunye noYilo kwaye zintathu ngenani ezizezi; I-Kimokran Scholarship, i-assist-on Scholarship, kunye ne-Woori Education Scholarship. Ukulungela ukufaneleka, abafaki-zicelo kufuneka babe ne-CGPA ye-3.3 kwaye bathathe inxaxheba ebonakalayo kuluntu lwesikolo.
Ngomlando omde wokwenza ubugcisa ngempumelelo kwaye ubekwe kwisixeko esiselunxwemeni esinobugcisa obahlukeneyo, iNova Scotia College yoBugcisa noyilo (i-NSCAD) igcwele amagcisa, abaqulunqi, abaphandi kunye nabaphengululi abafundisa abafundi izakhono ezibaluleke kakhulu eziyimfuneko ukuze uphumelele kwimeko yesikolo sobugcisa nangaphaya kweendonga zesikolo.
Iibhaso zeNSCAD zokufunda kubafundi abanemicimbi yemali abajolise ekufundeni esikolweni kwaye ezi nkxaso-mali zinikezelwa minyaka le.
Ukuthatha inxaxheba kwi-Entrance Scholarship, abafake izicelo kufuneka bafake izicelo ngomhla wokugqibela kaMatshi 1 ukuze baqwalaselwe ngokuzenzekelayo. I-NSCAD ikwabonelela ngaphezulu kwe-90 yangaphakathi yokufunda kunye neebhasari minyaka le yokufunda kwabafakizicelo abaphumeleleyo kuyo nayiphi na ikhosi abayithandayo.
Eyasungulwa ngo-1876, i-Ontario College ye-Art & Design University ithathwa njengesona sikolo sobugcisa esona sikhulu e-Ontario Canada, esikwabizwa ngokuba sesona sikolo sobugcisa sidala eCanada, elona ziko likhulu nelilelona lipheleleyo lobugcisa noyilo.
Ikholeji yase-Ontario yeDyunivesithi yaseArt & Design (i-OCAD U) izinikele kubugcisa nakwimfundo yoyilo, ukuziqhelanisa, kunye nophando kuluhlu olwahlukeneyo loqeqesho. Abafundi bazilolonge ngemfundo yobuhle kunye nobugcisa kunye kunye nezesayensi, ithiyori, ukugxeka, kunye nolwazi lwembali kunye neendlela.
I-OCAD U iququzelelwe kakuhle ngokwakhiwa kweziseko zophuculo zabafundi ukuze baqhubeke nokuphonononga ubuchule babo, benze uphando kunye nolunye uthethathethwano. Eli liziko yeyona ndawo ilungileyo ukuba ube kuyo ekuphuculeni amandla akho obugcisa kunye nokufezekisa injongo yakho.
Ukukhuthaza abafundi ukuba babe yinxalenye ye-OCAD U, iziko libonelela ngoncedo lwezezimali qho ngonyaka kubafundi abanokuba nengxaki yemali.
Uncedo lwezezimali olunikezelwa yi-OCAD U kukwamkela impumelelo yomfundi kwaye unikwa unyaka nonyaka kwinkqubo nganye enkulu kunye nonyaka ngokusekwe kumabanga okanye kukhuphiswano lomthetho, ezi zincedo zezi;
Scholarship zinikezelwa njengeekhredithi zokufunda ngaphambi kokuqala konyaka olandelayo wokufunda, abafundi abayidingi ukufaka isicelo kodwa baya kukhethwa ngokusekwe kwiziphumo zabo ezigqwesileyo ezifundweni kwinkqubo yabo yokufunda kwaye isifundi sinokuba lixesha elinye okanye sihlaziyeke ngokuxhomekeke kubafundi .
Ubungcali beeScholarships banikezelwa kwi-1, 2, kunye ne-3-level level kwii-Faculty of Art, Design, Arts Liberal & Sciences, kunye neSikolo seZifundo eziManyeneyo.
Awards bayayamkela ngokulinganayo impumelelo yomfundi kunye nezinto ezinokubakho kwezobugcisa kodwa banikwa inqanaba lonyaka we-4 ngesiqhelo kukhuphiswano lwezomthetho ekupheleni konyaka ngamnye wezifundo kwaye ngamabhaso emali.
amabhaso zinikezelwa ngaphakathi kokubhalwa kwenkqubo yokufunda kunye nokunikezelwa kwamabhaso kwaye zinokuba zikwimo yemali okanye engeyoyamali.
Eyasungulwa ngo-2007 kwaye yaziwa njengesikolo saseKhanada esona sikhulu sezobugcisa emva kwesekondari, isikolo saseYukon soBugcisa boBugcisa (i-SOVA) sinombono wokubonelela ngemfundo yobugcisa obubonakalayo kuluntu oludlamkileyo ngokwenkcubeko. Isikolo iYukon soBugcisa boBugcisa sesinye sezona zikolo zintsha kwezobugcisa eCanada.
Nangona iziko elitsha isikolo singakhange sisilele ekufezekiseni umbono waso ngabafundi baso. Abafundi bazilolonge ngezakhono ezisebenzayo kunye nezithiyori ukuzisa ubuchule babo bobugcisa kwaye babalungiselele uhambo oluzayo.
I-YSOVA ibonelela ngoncedo lokufunda rhoqo ngonyaka kubafundi abafuna ukuba yinxalenye yeziko kodwa betyhubela kubunzima bezezimali. Umenzi-sicelo kufuneka abe ngumfundi osisigxina obhalisiweyo kwiNkqubo yoBugcisa obuBonakalayo kwaye agcine umndilili we-B kwixesha lokuwa.
Imbasa yeWhiteHorse Motors yoBugcisa boBugcisaI-WhiteHorse motors yindawo esemthethweni yokuthengisa iFord ekhonza i-WhiteHorse kunye nendawo kwaye bangabaxhasi abakhutheleyo kunye namavolontiya asekuhlaleni anikezela ibhaso le- $ 1000 kumfundi obhalise ngokusisigxina kwinkqubo yobugcisa obubonwayo kwi-YSOVA.
Eyasungulwa ngo-1938, iKholeji yaseNew Brunswick yobugcisa kunye noyilo kuphela kweziko laseCanada eligxile ngokupheleleyo kubugcisa kunye noyilo
Ikholeji yaseNew Brunswick yoBugcisa kunye noYilo (i-NBCCD) sesinye sezona zikolo zibalaseleyo kwezobugcisa eCanada ezibonelela ngeenkqubo ezahlukeneyo zokufunda kwizitudiyo zobugcisa bendabuko kuyilo lwangoku lwedijithali kunye neNkqubo yoBugcisa boBugcisa.
I-NBCCD ibonelela ngesiseko esihle kakhulu sokuziqhelanisa nobuchule, ukukhula komntu, ukukhuthaza ishishini lokuyila, kunye nokusetyenziswa ekufundeni kubugcisa bobugcisa kunye noyilo oluvumela abafundi ukuba bafumane ubuchule babo obukhethekileyo bokuyila, baguqule umdla, amaphupha kunye neetalente zabafundi kwikhondo lomsebenzi kwaye ube Inxalenye yoluntu olukhulayo lobugcisa kunye neengcali zoyilo.
INew Brunswick College yoBugcisa kunye noYilo ibonelela ngoncedo lwezezimali kubafundi bexeshana nabafundi abasisigxina abafuna ukufunda kwiziko, ezi zincedo zezi;
Ibhasari yokufunda ehlaziyiweyo Luhlobo loncedo lwezezimali olwenzelwe ukunceda abafundi abanezithintelo ezomeleleyo zemali kunye nomenzi-sicelo okhethiweyo osoloko ejonge ukufunda kwi-NBCCD unokuza kufunda apho nebhasari.
Amabhaso amatsha eBrunswick Community College Foundation ixhasa abafundi abaninzi njengoko inkxaso mali ivumela. Isiseko sinikezela ngeebhasari, izifundi, kunye namabhaso kubafundi be-NBCCD ubukhulu becala kwicandelo abalithandayo.
Isiseko sikaSheila Hugh Mackay Ibhaso elinikwe umfundi kwiNkqubo ePhambili yokuSebenza yeStudiyo obonise izakhono ezigqwesileyo kubugcisa okanye uyilo kwaye uneerekhodi ezigqwesileyo zemfundo.
Izakhono zoQeqesho noPhuhliso lwePETL luhlobo loncedo lwezezimali olunikwa inani elikhethiweyo labafundi abahlangabezana neemfuno zenkqubo yeNkqubo yoQeqesho lweZakhono noPhuhliso (TSD).
Kuxhotyiswe ngezixhobo zobugcisa obuninzi, iSikolo se-Art yase-Ottawa njengesinye sezona zikolo zibalaseleyo eCanada senza umsebenzi owenziwayo wokuphucula izakhono zabafundi kubugcisa ukusukela ebusaneni ukuya kwinqanaba lokukhula kwaye ubalungiselele indlela yokujongana nobomi ngaphandle kwenkampu.
Isikolo sobugcisa i-Ottawa sibonelela ngenkxaso mali yokufunda, exhaswa ngabantu abathile, kubafundi abajolise ekuqhubekeni nephupha labo lokufunda kwiziko kwaye abafaki zicelo abakhethiweyo baya kukhetha ikhosi abayithandayo.
Eyasungulwa ngo-1967 njengesikolo sobugcisa eCanada kunye nendlela yokudala yekhampasi-eyenzelwe ukunika ukuxazulula iingxaki kunye nezixhobo zokucinga ezibucayi-kunye nenkqubo enzulu enika i-spectrum yokudala, i-Sheridan College, i-Faculty of Animation, ubuGcisa kunye noYilo inikezela abafundi amava amangalisayo okulungiselela umsebenzi kunye nobomi.
Ukunceda abafundi baqhubeke, eli ziko libonelela ngothotho lwamathuba oncedo lwezezimali kwabo banenjongo yokufunda eSheridan, la mathuba ngala;
Ukufundiswa kwezifundo kubonelelwa ngokusekwe kwiikhrayitheriya ezinjengokugqwesa kwizifundo, ukubandakanyeka kwabahlali, izakhono zobunkokeli, kunye neemfuno zemali.
I-Sheridan Degree yokungena kwiScholarship unikezela ngesibonelelo sokungena kwabafundi abafake izicelo ukuba baphambili kuyo nayiphi na inkqubo yeedigri.
Iibhasari zinikezelwa kubafundi abanemicimbi yemali eyomeleleyo kodwa abafuna ukufunda kwiKholeji yaseSheridan, kwiFakhalthi yoPhiliso, kubuGcisa noyilo.
academic Awards zinikezelwa nguSheridan kubafundi ababonisa ukusebenza ngokugqwesa kwizifundo, abafundi bonyulwa ngamalungu abo obuhlakani ukuphumelela eli bhaso.
Phezulu phaya, uneenkcukacha ezihlaziyiweyo ngokupheleleyo kwizikolo zobugcisa eziphambili eCanada ngezifundo eziqinisekileyo zokuphuhlisa kunye nokuphucula ubuchule bakho bobugcisa, zikwenze ube ngcono kwinto obusoloko uyithanda ukuyenza kwicandelo lezobugcisa, kwaye ikuqeqeshe ngezakhono iyafuneka ukujongana nomzi mveliso wokuyila.
Iiyunivesithi ezi-5 eCanada ngaphandle kweNtlawulo yokufaka isicelo yaBafundi baMazwe ngaMazwe nabaFundiweyo
Ungasifaka njani isicelo seDyunivesithi yaseCanada-Isikhokelo seNyathelo nenyathelo
I-10 zeYunivesithi eziPhezulu eCanada kwiSayensi yeKhompyutha
IYunivesithi yaseAlberta yoBugcisa | Ulwabiwo-mali | Imali yesikolo | Ukwamkelwa | Ukusetyenziswa
Izikolo ezili-15 zeZobugcisa eziBalaseleyo kwihlabathi
Bona amanye amanqaku am
UThaddaeus ngumyili womxholo okhokelayo e-SAN uneminyaka engaphezulu kwe-5 yamava kwinkalo yokuyila umxholo wobuchwephesha. Ubhale amanqaku aluncedo kwiiprojekthi zeBlockchain kwixesha elidlulileyo kwaye kwakutshanje kodwa ukusukela ngo-2020, usebenze ngakumbi ekudaleni izikhokelo zabafundi abafuna ukufunda phesheya.
Xa engabhali, mhlawumbi ubukele i-anime, esenza isidlo esimnandi, okanye ngokuqinisekileyo uyaqubha.
Izifundo ezili-12 eziPhezulu ze-MBA ezikwi-Intanethi ezineSatifikethi
Ungayifumana njani iMBA eNorway
Fumana i-MBA eJamani Ngaphandle kwe-GMAT okanye amava omsebenzi
Ungasifumana njani iMBA eSingapore
Scholarships yaseCanada Scholarships epheleleyo Scholarship Postgraduate Uphando kunye noBambiswano Iingcebiso zescholarship Isifundo kwamanye amazwe Isikhokelo Ukufunda kwelinye ilizwe kunye neScholarship Ngaphantsi kweeSchoolships
IYunivesithi yase-Alberta yezobugcisaIzikolo zobugcisa eCanadaIzikolo zobugcisa ecanada torontoIzikolo zobugcisa eCanada ngeeScholarshipsiiyunivesithi zobugcisa etorontoUbuGcisa kunye noKwakhaezona zikolo zibalaseleyo kwezobugcisaIziko lobuGcisa noYiloUniversity of ConcordiaIYunivesithi yaseEmily Carr yoBugcisa kunye noYiloYeFakhalthi yoopopayiISifundo soBugcisa boBugcisaIGeorge Brown CollegeIkholeji eNtsha yaseBrunswick yoBugcisa kunye noYiloIkholeji yaseNova Scotia yoBugcisa kunye noYiloIkholeji yaseOntario yobuGcisa bobuGcisa kunye noYiloIsikolo sobugcisa i-OttawaSheridan CollegeIsikolo saseYukon soBugcisa boBoniso
Post Previous:IYunivesithi ezi-7 eziGwenxa eCanada
Okulandelayo Post:Iikhosi ezi-15 zasimahla zokupheka kwi-Intanethi ezineZatifikethi
Pingback: Izikolo ezili-10 eziGqwesileyo zobuGcisa eCanada ezineScholar.hips kunye noncedo lwemali.
Pingback: Uluhlu lweeNyuvesi zasimahla eCanada zaBafundi beZizwe ngeZizwe ngo-2021
USusan Ukpong uthi:
Disemba 14, 2020 kwi-10: 36 pm
Nceda ndingadibana njani nayo nayiphi na le nto ukunceda nokuxhasa uluntu lwam, ndilunge kakhulu kwimisebenzi yezandla kwaye ndiya kufuna ukuzibandakanya kwinkonzo yoluntu kwizikolo ezahlukeneyo zaseNigeria
Matshi 17, 2021 kwi-4: 53 am
Izikolo zobugcisa ezidweliswe apha ziseCanada, hayi eNigeria.
Julayi 28, 2020 kwi-11: 27 pm
Ubungcali bobugcisa obuhle bukaNancy nagy buthatha amaxabiso amaninzi e-Itali nase-Egypt naseJordani
UNancy nagy uthi:
Julayi 28, 2020 kwi-11: 25 pm
I-Scholarship e-canda kuyilo nakwezobugcisa kunye nomsebenzi kwiigalari ndithatha amaxabiso amaninzi e-Itali nase-Jordan nase-Egypt
Juni 30, 2020 kwi-1: 26 pm
Ndingathanda ukufumana isifundi sokufunda i-ARTS eCanada. Ndingasifaka njani isicelo?
Julayi 1, 2020 kwi-9: 56 pm
Unokufaka isicelo kuso nasiphi na kwezi zikolo zilapha ngasentla njengoko zonke zinamalungiselelo okufunda
U-Anthony Tamale uthi:
Juni 23, 2021 kwi-10: 10 pm
Ndifuna isifundi eCanada ukuze ufumane isidanga kwi-ART nakwi-DESIGN.